(Mifototra amin'ny Asa. 19:1-20)
"Ary maro izay nino dia tonga ka niaiky sy nilaza ny asany. Ary maro ny mpanao ody no nanangona ny bokiny ka nandoro azy teo imason'ny olona rehetra; ary nony voatontaly ny tokom-bidiny, dia hita fa volafotsy dimy alina izany." - Asa. 19:18,19.
Ny nandoroan'ny Efesiana ny boky fanandroany dia nampiseho fa nankahala tanteraka ny ody izay nitokiany teo aloha ny olona niova fo. Tamin'ny nilalaovany ody no tena nanoherany indrindra an'Andriamanitra sy nahatonga loza tamin'ny fanahiny. Koa noho izany no nanehoany miharihary ny tena faharikorikoany izany fahalalana maizina izany (...) Raha tahiny ka mbola nihazona ireny boky ireny ny mpino, dia ho fakam-panahy lalandava ho azy izany. Ary raha ohatra koa ka namidiny ireny, dia ho nametraka ny rahalahiny teo amin'ny lalan'ny fakam-panahy izy. Efa nolaviny ny fanjakan'ny haizina, ary nopotehiny ny fahefany, ka dia tsy nisalasala hanao ny fandavan-tena rehetra izy. Toy izany no nandresen'ny fahamarinana ny hevi-diso sy ny fitiavam-bola. (...) Nisy fiantraikany lasa lavitra tokoa mihoatra noho izay nampoizin'ny apostoly Paoly aza ny vokatr'izany zava-niseho izany. Niitatra lavitra ny vaovao re tao Efesosy, ka nahatonga fandrosoana lehibe ho an'ny asan'i Kristy. Elabe taorian'ny nahavitan'ity apostoly ity ny fihazakazahany, dia mbola velona tao an-tsain'ny maro ihany ny zava-niseho, ary nanampy tamin'ny fahazoam-panahy ho an'ny filazantsara izany.
Tsy marina ny filazana fa foana tsy misy intsony ny fitokisana ny ody amin'izao taonjato faha 20 izao. Ahariharin'ny Tenin'Andriamanitra sy voaporofo amin'ny zava-misy fa mbola misy tokoa mandraka ankehitriny ny filalaovana ody toy ny tamin'ny andron'ireo mpanao izany fahiny. Ny fototra iorenan'ny filalaovana ody ankehitriny tokoa mantsy dia ny spiritisma, na ny fiantsoana sy ny fifaneraserana amin'izay heverina ho fanahin'ny maty. Mahita lalana ao amin'ny sain'ny olona anarivony maro i Satana, amin'ny fisehoany amin'izy ireny ho toy ny fanahin'ny olon-tiany efa nodimandry. (...)
Mbola ny mpimasy teo aloha tamin'ny andron'ny jentilisa ihany no hita ao amin'ny mpiantso fanahy sy ny mpanandro, ary ny mpisikidy mpilaza vintana ankehitriny. (...) Raha mba azo atao mantsy ny manainga ny voaly manakona ny masontsika, dia ho tazantsika ireo anjelin'i Satana mampiasa ny fahaizany rehetra mba hamitahana antsika sy hitarihana antsika ho amin'ny fahaverezana. Mampiasa fomba manodoka ny devoly na aiza na aiza ahazoany mampiasa hery hambaboana ny sain'ny olona hanadinoany an'Andriamanitra. (...) Mbola tokony hampiharina amin'ny vahoakan'Andriamanitra ankehitriny koa ny fananarana nataon'ny apostoly Paoly tamin'ny fiangonana tany Efesosy hoe: "Ary aza miray amin'ny asan´ny maizina tsy mahavoka-tsoa, fa aleo mananatra izany." - VM, tt. 252,253.